Sarkaal Sare oo ka tirsan QM oo cabsi ka muujiyey in Qaramada Midoobay ay burburto – Madal Furan
Hoy > Warka > Sarkaal Sare oo ka tirsan QM oo cabsi ka muujiyey in Qaramada Midoobay ay burburto
Sarkaal Sare oo ka tirsan QM oo cabsi ka muujiyey in Qaramada Midoobay ay burburto
Madal Furan – Sarkaal ka tirsan Qaramadda Midoobay isla markaasna ka mid ah khabiirada ugu wakhti dheer ka soo shaqeeyey AM, xilligana masuuliyad sare ka hayadaha ugu muhiimsan xafiisyada QM ayaa ku dhawaaqay in Qaramada Midoobay ay burbureyso.
Madaxa shaqada ka sii tegaya ee Hayadda Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobay Dr. Sacad Racdi Al-Huseini kaasoo dhalashadiisu ka soo jeedo dalka Urdun oo khudbadiisii u danbeysay u jeediyey 15-ka xubnood ee Golaha Amaanka ee ay ku jiraan Shanta dal ee leh awooda VITO ee codka diidmada qayaxan ayuu kaga hadlay xaaladda Qaramadda Midoobay oo uu tilmaamay inay ka hartay xiligii ay dumi laheyd maalmo fara kutiris ah.
Arrintaas ayaa wuxuu ku eedeeyey inay ka danbeeyaan Shanta dal ee leh codka diidmada qayaxan ee VITO, kuwaasoo kala ah Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska iyo Ingiriiska, isla markaasna codkooda diidmada u isticmaala qaraar walba oo ay danahooda ka arki waayaan.
Dr. Sacad wuxuu kaloo sheegay in xubnaha kale ee ka tirsan Qaramada Midoobay ee aan laheyn codka VITO Power ay iminka is weydiinayaan sababta ay uga mid yihiin xubinimada QM maadaama ay noqdeen asal madooriye kuraasta iska dul fadhiya.
Dr. ayaa ka hadlay xiliyada ay hayadaha Xuquuqul Insaanku soo bandhigaan qaraar la doonayo in lagu badbaadiyo xuquuqda dal ama dad sida dhibaatada ka jirta waddamada Falastiin, Suuriya, Mymar iyo dalal kale ay is-hortaagaan Shanta dal ee leh codka diidmada qayaxan.
Dr. Sacad ayaa ka digay in mudo 10 sanadood gudahood ah ay dhici karto in lagu kala tago QM, haddii aysan imaan in wax laga bedelo hab-dhaqanka Shanta Dowladood ee awooda weyn ku leh gudaha xafiiska Qaramada Midoobay.
Dad Caddaan ah oo Af Soomaaliga ganna ka ah oo baranaya luqadda Soomaaliga.
Hargeysa: 30 Dumara oo Magafe caruur kaga haysto Liibiya oo Somaliland xabsiga u taxaabtay
Wakiilka QM ee Somalia oo tegay Kismaayo lana kulmaya Odayaasha, musharixiinta iyo Axmed Madoobe.